Sida loo geliyo faraha naagta: tilmaamaha iyo tabaha | Ragga Stylish
Nolosha galmada ee qofku ma laha sharciyo ama tilmaamo. Ma aha wax aan aasaasi karno oo aasaas u ah oo qof walba si siman ugu shaqeeya. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira farsamooyin aasaasi ah oo badanaa u shaqeeya dadka badankood. Xaaladdan oo kale, maanta waxaan ka hadli doonnaa sida faraha dumarka looga geliyo. Haddii aad tan akhrinaysid waxa weeye inaadan si cad u caddayn haddii aad karti u leedahay inaad siiso gabadhaada dhammaan raaxada aad rabto inaad siiso.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno sida aad farahaaga ugu soo bandhigtid haweeney iyo waxa ay tahay inaad tixgeliso si aad u siiso raaxada ugu badan.
1 Sida faraha dumarka looga geliyo
2 Qorshe aasaasi ah
3 Sida farta loo galiyo haweeneyda loona siigeysto kintirka
4 Khaladaadka ugu badan
Rag badan ayaa xoogga saaraya boosaska inta lagu gudajiro dhexgalka oo aan si aad ah diiradda u saarin hordhaca iyo sida raaxada loo siiyo. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad wax u barato aroosyada mustaqbalka yimaada ama siiya gabadhaada dhammaan raaxada ay u qalanto. Jinsigu aad buu uga badan yahay uun gelitaanka iyo raadinta boos la mid ah fiidiyowyada qaawan. Cayaartu waa lama huraan, gaar ahaan haddii aad isla joogteen isla lamaanahaaga muddo dheer. Waa wax caadi ah in ninku uu haweeneyda ku dhameystiro ka hor haweeneyda, taas oo gabi ahaanba lama huraan u ah inuu sii wado la ciyaarida xubnaha jirkiisa si haweeneydu u gaarto kacsiga.
Waan ognahay in siigaysiga haweeneydu ay dhib badan tahay, sidaa darteed, waxaan sharaxaad ka bixin doonnaa sida faraha dumarka looga galiyo. Dhibaatada jirta ayaa ah in haweeney kastaa ay tahay aduunyo kale waxaana guud ahaan la ogyahay in ragga ay waqti aad uga fudud ka gaadhaan kacsiga. Haddii aadan aqoonin haweeneyda, siigeysiga iyada ayaa dhib noqon kara. Waxaa jira haween doorbida inay gaaraan kacsiga iyagoo kicinaya kintirka sidoo kale waxaa jira kuwa doorbida inay cimilada ku gaaraan wax galid ama wax lamid ah. Midka hore waxaa loo kala saaraa inuu yahay kintirka iyo tan labaad oo siilka ah.
Haddii ujeeddada koowaad ay tahay inaad ku qanacdo gacmahaaga, waa inaad hubisaa inay haweeneydu gareyso kacsiga. Barashada sida faraha looga dhaadhiciyo haweeneyda waa lama huraan inaad siiso raaxo haweeneyda kula joogta.
Qorshe aasaasi ah
Waxaan falanqeyneynaa qaar ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah barashada sida loo baro faraha dumarka. Waa inaad sifiican u ogaataa aagagga erogene-ka ee ay haweenku ku leeyihiin qeybahooda ugu dhow. Kuwani waa qaybaha ugu muhiimsan:
Vulva: Qeybtaan oo dhan waxaa ka mid ah kintirka, kaadi mareenka, faruuryaha taranka, iyo irida siilka. Waa inaadan ku dhex milmin oo keliya laakiin sidoo kale aad ku ciyaarto meelahaas oo dhan, adigoo wax ka beddelaya dhiirrigelinta jawaabta aad ku dhex aragtid.
Kintirka: waa xubinta kaliya ee jirka dumarka shaqadeeda ugu weyni ay tahay bixinta raaxada. Rag badan ayaan sifiican u helin kintirka waxayna u egtahay shaashad yar. Dumar badan kintirka ayaa fure u ah inuu gaaro kacsiga. Waxaa jira kumanaan qaab oo loo kiciyo xubintan waana inaan helnaa hab aan ula qabsano dhadhanka haweeney kasta.
Sanadka: Waa qayb ka mid ah jirka dumarka oo kicin kara haddii aad ku dhex jirto galmada.
Sida farta loo galiyo haweeneyda loona siigeysto kintirka
Mar alla markii aan ogaanno halka qayb kastaa ku taal, waxaa la joogaa xilligii aan ganacsiga u dhaadhicin lahayn. Haweenka waxa ugu farxada badan waa kintirka oo la kiciyo. Habka ugu fudud ee lagu kicin karo kintirka waa adigoo ku xoqdid labo ama saddex farood wada jir. Ka taxaddar inaadan ka dhigin mid aad u xoogan maadaama ay tahay meel aad u xasaasi ah oo si fudud u dhaawici karta. Waxaa xiiso leh in faraha lagu saliido candhuuf ama wax saliid ah.
Waad ku sameyn kartaa si siman ama wareeg ah. Iska jir inaad kor u kacdo oo aad hoos u degto maxaa yeelay way ka sii xumaan kartaa inaad shil ku dhufato kaadi mareenka. Kaadi mareenka waa meesha haweenku ku kaadiyaan. Raaxo aad u daran waa inaad isticmaashaa gacmahaaga bilaashka ah si aad u kiciso bogga. Waxaad ka geli kartaa hal, laba ama in ka badan laba aaggan. Waxaan si fiican u sharxi doonnaa sida farahaaga loogu baro haweeney.
Goobta barta-G way ku kala duwan tahay haweeneyda. Had iyo jeer isku meel ma aha. Si kastaba ha noqotee, inta badan dumarka oo dhan waxay ku leeyihiin derbiga siilka hore. Gaar ahaan, waxay ku taal inta u dhexeysa 5-8 sentimitir gudaha xubinta taranka. Si aad u awooddo inaad siigaysato qodobkan ugu nugul, waa inaad farahaaga u dhigtaa qaab C ah si aad ugu cadaato aagga laga hadlayo. Maskaxda ku hay in faraha intiisa kale ay tahay inay u jeedaan xagga sare. Markaad farahaaga gudaha gasho, waxaad isku dayi kartaa inaad u dhaqaaqdo kor iyo hoos, dhinac ilaa dhinac isla markaana dhaqso iyo xoog leh.
Waa inaad taxaddartaa oo aad ka qaaddaa falcelinta gabadhaada. Si tartiib tartiib ah u soco si aad u aragto waxyaabaha kiciya ee gabadhaada ka dhigaya mid raaxo badan leh. Waxaa jira haween waqti dheer ku qaadanaya inay gaaraan orgaanku, maadaama ay sidoo kale maskaxda ku jirto. Kalsoonida iyo heerka kicintu waa lama huraan si loo gaaro kacsiga dumarka.
Khaladaadka ugu badan
Waxaan u adeegsaneynaa qaladaadka ugu caansan ee dhaca marka la baranayo sida faraha dumarka loo galiyo loona galmoodo. Kuwani waa khaladaadka ugu waaweyn:
Daryeelka gacmahaaga: gacmuhu waa inaysan fuuqbaxin oo ay yeeshaan ciddiyo dhaadheer. Sidoo kale waa ku habboon tahay in la nadiifiyo.
Ma helin kintirkaIn kasta oo ay tani tahay wax qurux badan oo aasaasi ah, haddana waxaa jira rag badan oo qalad ku khaldama.
Ha u isticmaalin saliid: In kasta oo tani ay gebi ahaanba lagama maarmaan u tahay dumarka oo dhan, way ku habboon tahay in dhammaan aagagga si wanaagsan loo dhigo.
Ka dhig jilitaanka far
Ha taaban dharka
Diirad saarida xubinta taranka haweenka
Ha la xiriirin
Ha isticmaalin carrabka
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho walxaha farsamada.
Waxyaabahan u isticmaal kaliya hordhac ahaan.
Sidaad u aragto, waxaa jira qaabab badan oo dumarka lagu farxin karo waxaanan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida farahaaga loo galiyo haweeney.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida faraha dumarka looga geliyo